Xisbiga MP oo hoos uga dhacay xadka lagu galo baarlamanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiga MP oo hoos uga dhacay xadka lagu galo baarlamanka
Tomas Ramberg "M iyo S ayay guushu ku raacday tira-koobkan
La cusbooneeyay tisdag 5 december 2017 kl 12.35
La daabacay tisdag 5 december 2017 kl 11.47
Xisbiga Miljöpartiet (MP) ayaa hoos uga dhacay xadka u deg-san sidii ey xisbiyadu ku hanan lahaayeen xubin-nimmada baarlamanka 3,8% ayuu xisbigu nasiib u yeeshay saadaalintii tira-koobka hayadda SCB ee maanta la shaaciyey.
Halka uu xisbiga Moderaterna aad kor ugu kacay.
Haddii ay maanta ahaan lahayd maalin ay dalka ka dhacdo doorasho ayuu xisbiga Miljöpartiet kuraastiisa ku waayi lahaa baarlamanka, sida ku cad tira-koobka hayadda saadaalinta ee magaceeda loo soo gaabiyo SCB ee bishii noveembar. Tira-koobkii midkan ka horreeyay ee la qabtay bishii maajo ee isla sannadka ayuu xisbiga MP ku hantiyay taageero hubsiinno ah ee gaarsii-san 4,5%. Halka uu xisbigu ku guuleeystayy taageerada shacabka ee gaarsii-san 6,9% doorashadii ugu dambeeysay ee dalka ka dhacda 2014-kii.
Saameeynta hogaamiye Kristersson.
Muddadii ka horreeysay saadaalinta tirakoobka SCB ayaa la is weeydiinayay inuu hoggaamiyaha cusub ee xisbiga Moderaterna (M) Ulf Kristersson uu ku guuleeystay inuu dib xisbiga ugu soo celiyo taageereyaashii uu horay u lahaa ee xisbiyada kale u wareegey. Iyada oo iminka ay saadaalinta tira-koobka ka muuqato inuu xisbiga M uu aad kor ugu kacay 4,1%. Taageerada xisbiga ee iminka ayaa gaarsii-san 22.2%.
Xisbiga Moderaterna ayay muuqataa inuu dib ugala soo laabtay taageryaal xisbiga SD (1,4%) iyo kooxda bulshada ee aan go’aan-san cidda ay u codeeyn doonaan (1,4%), iyo sidoo kale xisbiga C (0,5%) iyo xisbiga Liberalerna (0,4%). Iyada oo iminka ay u muuqato inay taageerada xisbigu ku wajahan tahay natiijadii uu ku helay doorashadii 2014 oo gaarsiisnayd 23,3%.
Halka uu xisbiga M kor u kacay ayay dhanka kale hoos u dhacday 1,8% taageerada xisbiga Center-ka. Xisbiga C ayaa saadaalinta SCB ku hantiyay taageero gaarsii-san 9,5%. Halka uu xisbiga Liberalerna oo hantiyay 4,2% uu fara ciddi leh uga baxsaday inuu ka dhaco xadka xubin-nimmada baarlamanka. Xisbiga L ayaa lumiyay taageero gaarsii-san 0,8%.
Xisbiga KD oo taageeradiisu ka hooseeyso 4%
Xisbiga Kristdemokraterna waxay taageeradiisu weli ka hooseeysaa saqafka 4% ee xeerku qorayo inuu xisbigu ugu yaraan helo si uu xubin uga noqdo baarlamanka. Xisbiga KD ayaa hantiyay taageero gaarsii-san 3,1%.
Isu-geeyn xisbiyada afarta ah ee garabka midig ee lagu magacaabo Alliansen waxey tira-koobkan ku hantiyeen taageero gaarsii-san 39,2%, halka ey xisbiyada ku bahoobey awoodda dalka ee Socialdemokraterna iyo Miljöpartiet wada-jir u hantiyeen taageero gaarsii-san 36,4%. Hase yeeshee haddii lagu tiriyo xisbiga Vänsterka oo hantiyay 7,0% ay taageerada garabka bidix ee Casaan-Cagaarku noqonayso 43,4%.
Xisbiga Socialdemokraterna ayay taageeradiisu kor u kacday 1,5%, isagoona uu xisbigu taageero ku helay 32,6%, waana taageero ka sarreeysa natiijadii uu xisbiga S ku helay doorashadii 2014.
Xisbiga Sverigedemokraterna wuxuu tira-koobkan ku lumiyay taageero gaarsii-san 3,6%. Xisbiga SD ayaa ku hantiyay 14,2%. Waxaa istaagay kor u kicii taageerada xisbiga. Saadaalintii middaan ka horreeysay ee bishii maajo 2017 ayuu xisbiga SD ku hantiyay 18,4%, ahaydna kaalintii labaad ee xisbiyada. Xisbiga SD ayaa iminka ku sugan kaalinta saddexaad ee taageerada ay bulshadu u hayso xisbiyada. Hase yeeshee waa taageero ka sarreeysa middii uu xisbiga SD ku helay doorashadii 2014 oo uu hantiyay 12,9%.
Go'aan ma gaartay xisbiga aad u codeeyn doonto?
Ma codeeyn doono
Xisbiga SD oo M taageero kaga sita nawaaxiga Koonfureed ee dalka
Garabka Alliansen oo ka taageero sarreeya garabka casaan cagaarka